Ny fiheverana voalohany natolotry ny Wileyhio Spark X | Androidsis
Fiheverana voalohany an'ny Wileyhio Spark X
Wileyhio dia fanombohana britanika izay nanjary iray amin'ireo mahaliana indrindra any Eropa ho an'ny finday avo lenta mora vidy. Ny telefaonin'izy ireo koa dia miavaka amin'ny fananana CyanogenMod ho ROM ary mahamarika izany rehefa manandrana mihodina amin'ny smartphone, satria tsy manelingelina an'io fanandramana manokana Android hanovana ny zavatra tadiavin'ny olona io, manampy amin'ny ROOT sy hametraka ROM hafa raha tiana, ankoatry ny up to date raha resaka Android.
Wileyoks Spark X dia iray amin'ireo filanao matotra indrindra amin'ny finday avo lenta izay navoaka 4 volana lasa izay ary mampiavaka an'i a 5,5 ″ efijery, RAM 2 GB, puce quad-core Mediatek 1,3 GHz ary fakan-tsary 13 MP aoriana miampy fakan-tsary eo anoloana 8MP. Smartphone iray izay tsy mihoatra ny € 149,99 ary miavaka amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny CyanogenMod, noho izany, raha efa nandalo an'io ROM io ianao tao amin'ny terminal anao dia efa fantatrao hoe inona no ifikiranao, amin'ny fomba tsara, miaraka amin'ity finday ity .
1 Finday iray miaraka amin'i CyanogenMod
2 Spark X famaritana
3 Ny kilemanao 2 kely
Finday iray miaraka amin'i CyanogenMod
Ity no singa lehibe indrindra amin'ny fomba fijeriko miaraka amin'ny Spark X. A CyanogenMod izay dia nanaporofo ny vidiny tamin'ny fanomezana ROM maro ho an'ny vondrom-piarahamonina Android, raha mila vondronà mpamorona mahalala ny fomba hitrandrahana betsaka indrindra amin'ny fampitaovana marika iray izay tsy nijery ny toe-javatra mety indrindra amin'ny lozisialy.
Misaotra ireo taona ireo, CyanogenMod dia nanao anarana ho an'ny tenany ary ny fitaovana rehetra natomboka teny an-tsena niaraka tamin'ny CM dia nanana ny antso manokana natokana ho azy. Izany no mitranga amin'ny Spark X, finday avo lenta iray izay manao tsara tokoa amin'ny teny rehetra ary afaka mahazo amin'ny vidiny mora ianao mba hahafahanao mitanjozotra aminy raha tianao izany. Ity dia iray amin'ireo lafiny tsara indrindra aminy, satria ho tsapanao fa anao tokoa ny telefaona ary tsy mila mangataka alalana hametraka ny tananao amin'izay tianao ianao.
Ao amin'ireo andinindininy no ahitantsika ny fandanjalanjana lehibe hananana puce MediaTek quad-core, Efijery HD 5,5 ″ HD, RAM 2 GB, fitadidiana anatiny 16GB misy safidy micro SD ary bateria 2.200mAh. Izy io koa dia manana SIM roa sy Android 6.0.1 amin'ny endrika CyanogenMod 13. Tonga amin'ny andro bateria lavorary izy io ary telefaona manome traikefa Android tena tsara.
Spark X famaritana
5,5 ″ efijery HD IPS LCD 1280 x 720 267 ppi
Quad-core Mediatek 1,37GHz puce
Kitapo fakan-tsary 13 MP aoriana amin'ny 1080p
Fakantsary 8 MP
Milanja: 163 grama
Ny kilemanao 2 kely
Fahasembanana kely roa ho an'ny telefaona izay manome fahombiazana lehibe amin'ny vidiny. Voalohany dia ny famahana kely ananany, HD ihany (1280 x 720), smartphone amin'ny fakantsary 5,5 ″. Azo antoka fa tsy afaka mangataka ny zava-drehetra ianao, fa raha nanidina tamin'ny Full HD izy io dia mety ho telefaona boribory io.
Ny teboka hafa hitako hoe ratsy dia io hita ilay mpandahateny amin'ny farany ambany. Mety ho efa zatra ny Xperia Z5 aho izay mametraka ireo stereo stereo roa apetraka ambony sy ambany eo anoloana, saingy andinindininy izay tsy tiako ho diso io.
Raha tsy izany, fahatsapana tena tsara ho an'ny terminal iray amin'ny vidiny € 149,99, raha tsy misy ny fanadihadiana izay ho avy tsy ho ela avy amin'ireo andalana ireo ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fiheverana voalohany an'ny Wileyhio Spark X
Fanavaozana ny mpandefa zana-tsipìka miaraka amin'ny Google Search Integration sy maro hafa